Mabhuku akanakisa enhoroondo
Paul Preston Wepamusoro 3 Mabhuku
Sezvinowanzo taurwa pakati peanoseka uye ichokwadi, padyo nedudziro zvinoreva ChiSpanish kunofanirwa kuratidzika kumeso kwaPaul Preston. Nekuti, semunyori wenhoroondo (uye chaizvo nekushingairira kukuru mune ichi chisingaperi chechiSpanish), munyori wechiChirungu akaongorora ndokupedzisira kuunganidza nekuparadzira ...
Imba Yekusingaperi, naYuri Slezkine
Rwiyo rwaDef naDos rhetorically akashamisika kuti ndiani akashandura hurukuro dzaLenin. Panofanirwa kuve paine mumwe akapara mudambudziko iro raive kuiswa kwechicommunism. Uye ndezvekuti hongu, pamusoro pemumhanzi parody chimwe chinhu chakatadza, chakashata zvachose. Chekutanga pane zvese nekuti ndinoziva ...
M. Murume weprovidence, naAntonio Scurati
Zvakaitika zvinoratidza kuti kupa kunotarisirwa munguva dzakaoma kwazvo pasi. Semvura yemadutu makuru, nguva pfupi mheni isati yarova. Hapana chinhu chiri nani kupfuura yakanaka populism inokwanisa kuzviratidza semhare yeramangwana rakanaka kuitira kuti kutenda kusinganzwisisike kugume ...
Killer Ladies: Vanouraya Vakadzi muNhoroondo, naTori Telfer
Kuti kuuraya hakuna murume kana mukadzi hazvibvunzwe. Oswald, mhondi nebhuku rake The Catcher in the Rye pasi peruoko rwake, kana York Ripper kana kunyangwe "Mhumhi yeMoscow" ingadai yakasvika pamazuva edu. Asi hongu, kunewo vakadzi vanoda mhosva yakanyanyisa ...
3 akanakisa mabhuku aHenry Kamen
Kune mazuva asinganzwisisike ekushanda seanokudzwa Hispanicist. Uye kunyangwe izvi, vakomana vakaita saPaul Preston, Ian Gibson kana Henry Kamen vanoomerera pakuenderera mberi nekutarisa nyaya iyo, dai yaive yemamwe madiro akakombamira panhema, nhema nhema kana kufarira ethnocentric, yaizopedzisira yavhiringidzwa zvachose. ...
Muedzo weCaudillo, naJuan Eslava Galán
Zigzagging pakati penyaya huru dzenhoroondo uye mabasa anodzidzisa, Juan Eslava Galán anogara achimutsa kufarira kukuru pakati pevaverengi, kufarira kwemunyori kwakarongedzwa mubhuku rebhaibheri sekukura kwazvinoita. Pane ino nguva, Eslava Galán anotiunza padhuze nemufananidzo unozivikanwa. Uyo aine vadzvanyiriri vaviri achifamba ...
Notre Dame, naKen Follett
Zvichida bhuku iri nderimwe rezvakanaka zvishoma zvekutora kubva pane yaive imwe yetsaona huru dzezvatave tiri muzana rino ramakumi maviri nemasere. Ken Follett aizoisa parutivi zvese zvaaiita kuti atipe bhuku rakanyorwa kubva pakunzwa kwakanyanya kwekurasikirwa kukuru. Nekuti kupfuura ...
Manzwi eChernobyl, naSvetlana Aleksievich
Akatumirwa pazasi aive nemakore gumi okuberekwa musi waApril 10, 26. Zuva rakasuruvarisa iro nyika yakanga yave kusvika padambudziko renyukireya rakanyanya. Uye chinhu chinonakidza ndechekuti yanga isati iri bhomba yakatyisidzira kupedza nyika muCold War yakaenderera ...
Iyo Rima Zera, rakanyorwa naCatherine Nixey
Uye pakafa Jesu pamuchinjikwa, zuva rakashanduka rikava husiku. Ngano kana kuora? yekudzora nyaya yacho kusvika pakuseka. Iyo poindi ndeyekuti hakugone kuve nemufananidzo uri nani wekutarisa kuti kuberekwa kwechiKristu, patsoka dzemuchinjikwa, kwakawana iyo imwecheteyo rima toni ...
Peji1 Peji2 Peji3 Zvadaro →
Peji rinotevera "